Jack Wilshere Oo Rajaynaya Inuu Taam Unoqondoono Koobka Aduunka.
Ciyaartoyga Khadka dhexe ee xulka England Jack Wilshere ayaa rajaynaya inuu taam unoqondoono koobka aduunka inkasta oo uuna ciyaar ku bilaabanin ilaa bishii March ee sanadkan.
Wilshere oo da’diisu tahay 22 jir ayaa ku dhaawac may ciyaartii saaxiibtinimo ee dhexmartay xulalka England iyo Denmark taas oo dhacday March. England ayaa kulan la yeelandoonta xulka peru, Honduras iyo Ecuador kulamadan oo ka mid ah kuwa ay ugu diyaar garoobayaan koobka aduunka, wilshere ayaa doonay inuu kulamadan u isticmaalo sidii uu taam ugu noqon lahaa koobka aduunka.
Wilshere ayaa yidhi : “Wali taam ma ihi, ta kaliya ee aad diyaar ku noqon kartaa waa inaad kulamo ciyaarto, waxaanan taam u ahayn sidaanan kulamo u ciyaarin”
“Waxkasta oo aan samayn karayay waan sameeyay, hadda waxaan u baahanahay kulamo aan ciyaaro horena way u imanaysaa. Hadii aan ciyaaro dhawrka kulan ee saaxiibtinimo waxaan hubaa inaan taam noqon doono”
Wilshere ayaa ka mid ah 23 ciyaartoy ee uu Roy Hodgson u magacaabay xulka England wuxuuna Wilshere sheegay sida uu ugu faraxsan yahay in lasiiyay fursadan wuxuuna yidhi : “Waan ka walwalsanaa inaan xulka ku soo baxayo. Haddii layga reebi lahaa waxay igu noqon lahayd niyad jab wayn laakiin waa dareen fiican inaan ka mid noqdaa”
Barcelona Oo Doonaysa Miranda Inay ku Xoojiso Difaaceeda.
Kooxda Barcelona ayaa doonaysa inay xili ciyaareedka danbe difaaceeda ku xoojiso Joao Miranda. Barcelona ayaa daraasaynasa dhawr ciyaartoy oo difaceed ay ku xoojiso waxaayna doonayaan inay laba ciyaartoy oo difaaca ay suuqa ugalaan.
Barcelona ayaa xidhiidhkii u horaysay la samaysay wakiilka Miranda maant oo Arbaco ah waxayna doonayaan inay wada xaajood la yeeshaan sida uu noqonayo heshiiskiisa cusubi. Balse waxayna wada xaajood la yeelandoonin kooxda Atletico Madrid oo aan iyadu doonayn inay iska iibiyaan Ciyaartoygan waxayna ugu yaraan ku iibin karaan 20million.
Miranda ayaa difaaca Barcelona ku soo kordhindoona khibrad isagoo da’diisu tahay 29 jir, wuxuuna si fiican u yaqaanaa qaab ciyaareedka horyaalka Spain. Miranda ayaa xili ciyaareedkan dhamaaday wuxuu soo ban dhigay qaab ciyaareed aad looga yaabay.
Barcelona ayaa sidoo kale waxay isha ku haysaa Marquinhos kaas oo sheegay inuu doonayo inuu Barcelona u ciyaaro xili ciyaareedka danbe. Salaasadii ayaa idaacad Barcelona leedahay laga siidaayay waraysi uu ku sheegayo arintan balse ciyaartoyga ayaa saacad kadib beeniyay.
Di Maria: Argentina Fashil Ayay U Noqonaysaa Hadyna Kuguulaysan Koobka Aduunka.
Xidiga baasha ee xulka qaranka Argentina iyo kooxda Real Madrid Angel Di Maria ayaa carabka ku adkeeyay in Argentine ay guuldaro u ahanayso haddii ayna koobka aduunka ku guulaysan.
Argentina ayay ugu danbaysay koob aduun oo ay ku guulaysato sanadkii 1986 markaas oo ay Germany 3:2 ku garaaceen finalkii koobka aduunka. Di Maria ayaa doonaya inay dib ugu soo celiyaan jamaahiirtoodu inay mar kale farxaan marka ay xagaaga Brazil tagaan.
Di Maria ayaa yidhi: “Haddii aanaan ku guulaysan koobka aduunka, waxay noqondoontaa fashil. Tani waa xaqiiqada, aduunyada oo dhan ayaa tixgalinaysa inay tani tahay fashil haddii aanaan ku guulaysan koobkan aduunka”
“Waxay noqonaysaa 7 ciyaarood oo aad u adag oo aan macquul ahayn, waa inaanu wax kasta u hurnaa si aan u gaadhno riyadeena”.
“Waa inaan wax kasta u hurnaa, waana inaan rajaynaa inaan garoonka ku dhex dhimano si aan u gaadhno finalka iyo inaan ku guulaysano koobka”
Argentina ayaa koobka aduunka waxay kaga hadhay quarter-finalka labdii koob aduun ee u danbeeyay. Argentina waa inay iskaga jahaysaa xulalka Nigeria, Bosnia iyo Herzegovina iyo Iran si ay u gaadho 16 xul ee ka soo bixidoona groupska.
Barcelona Oo 20milyan Euro Iyo Alves Ku Doonaysa Marquinhos.
Kooxda Barcelona ayaa doonaysa inay soo gaba gabayso saxiixa daafaca kooxda PSG Marquinhos maanta sida ay qorayaan intabadan wargaysyada ka soo baxa France iyo Spain.
El Mundo ayaa sheegaysa in kooxda Barcelona ay diyaar u tahay inay ku dalbato laacib ka PSG 20 milyan oo euro iyo Alves si ay ugu qanciyaan PSG inay ka iibiso 20 jir kaan ree Brazil.
PSG ayaa si wayn u doonaysa daafaca kooxda Barcelona Alves sidoo kale waxay heshiis rikoor ah kula soo wareegeen daaficii hore ee Chelsea David Luiz, waxayna diyaar u yihiin inay iska fasaxaan Marquinhos hadiiba ay helayaan Alves iyo lacag.
Suarez Oo U sheegay Asxaabtiisa Liverpool Ee England Ku jirta Inuu Diyaar U yahay Koobka Aduunka.
Luis Suarez ayaa u sheegay ciyaartoyda ay isku kooxda yihiin ee Leverpool kuwaas oo ku jira xulka England inuu diyaar u yahay inuu ka horyimaado. Suarez ayaa cadeeayay inuu taam u yahay inuu England wajaho.
Ciyaartoygan udhashay dalka Uruguay ee Suarez ayaa fariin qoraala u diray ciyaartoyda liverpool eek a qayb qaadanaya xulka England isagoo sheegay inuu diyaar u yahay Koobka aduunka ee Brazil
Suarez ayaa maray qaliin jilibka ah wuxuuna u muuqday inuu seegi karo koobka aduunka balse ugu danbayntii wuxuu shaaca ka qaaday inuu ka soo kasbaday dhaawacaas.Suarez ayaa war fiican u ah xulka Uruguay wuxuuna cabsi galinayaa xulka England balse Henderson ayaa aaminsan inuuna Suarez waligii isdhiibayn wuxuuna sheegay inuu ciyaaridoono bisha danbe ee tartanku furmayo.
Henderson ayaa yidhi: “Qofkastaaba wuu ka niyad jabay dhaawaca luis, laakiin dadka isaga yaqaanaa waxay ogyihiin inuu muhiim u yahay Uruguay laalkiin anaga maaha. Waxan u diray fariin qoraala inaan ogaado xaalkiisa waxaanan u rajeeyay nasiib wanaagsan. Wuu u dagaalamidoonaa waanan hubaa inuu taa samaynayo wuuna ciyaaridoonaa ciyaarta koowaad ama labaad”
Vicente del Bosque Oo Iska Diiday Inuu Tababare U Noqdo Man United.
Tababaraha xulka qaranka Spain Vicente del Bosque ayaa iska diiday dalab ay ula timid kooxda Man United si uu tababare ugu noqdo xili ciyaareed ka danbe.
Wargayska AS ayaa sheegaya in kooxda Man United ay aad u bartilmaameed sanaysay tababaraha xulka qaranka Spain lakiin Vicente del Bosque ayaa iska diiday dalabka United isagoo sheegay inuu doonayo inuu sii layliyo xulka Spain ilaa Euro 2016.
Man United ayaa iska cayrisay tababareheedii hore ee David Moyes lakiin waxay tababare u magacaabeen Van Gaal kaas oo kooxda laylin doona xili ciyaareed ka soo socda.
Wargayska ayaa intaa sii raaciyay in Vicente del Bosque uu dalab ka helay 2011 kooxda Inter Milan lakiin tababarahaan ayaa sidoo kale iska diiday dhamaan dalabyadaas isagoo sheegay inuusan qorshaynayn inuu katago laylinta qaranka Spain.
Cristiano Ronaldo Oo Loo Magacaabay Ciyaartoyga Aduunka Ugu Caansan Ayaase Soo Raacay?
Kadib markii uu Real Madrid ka caawiyay inay ku guulaystaan horyaalka Yurub ee Champions leaque ayaa Cristiano Ronaldo loo magacaabay ciyaartoyga aduunka ugu fiican. Waxaana qiimayntan samaysay Repucom oo ah meel samaysa cilmi baadhista aduunka ee ciyaaraha.
Lionel Messi ayaa kalinta labaad galay halka uu Pique kaalinta sadexaad cidhiidhsaday . Rooney ayaa soo galay shanta u saraysa halkan ka bogo liiska oo dhamaystiran
Arsenal Oo Isku Diyaarinaysa Inay Dalab Ka Gudbiso Angel Di Maria.
Kooxda Arsenal ayaa indhaha la raacaysa xidiga kooxda Real Madrid Angel Di Maria waxayna ku guul daraysteen xaggaagii tagay inay la soo wareegaan lakiin mar kale ayeey isku dayi doonaan inay lasoo wareegaan.
Wargayska Marca ayaa shaaciyay in kooxda Arsenal ay diyaar u tahay inay hor dhigto dhigeeda Real Madrid dalab ay adagtahay in la diido iyagoo ku sheegay in kooxda ree ingiriis ay doonayso inay ku dalbato laacib kaan 40 milyan oo euro.
Warar kale oo laga helay ilo u dhaw laacib ka ayaa sheegaya in Di Maria uu doonayo inuu go,aan ka gaaro mustaqbal kiisa Real Madrid ka hor koobka adduunka.
Madax waynaha kooxda Real Madrid Perez ayaa sheegay in Di Maria uusan katagi doonin kooxda isagoo sii raaciyay inuu sii joogi doono sanado badan, lakiin tababaraha Arsenal ayaa isku dayi doona inuu helo laacib kaan xulka Argentina.
Liverpool Oo Dhamaystirtay Saxiixa Adam Lallana.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in kooxda Liverpool ay ku guulaysatay saxiixa 26 jir ka kooxda Southampton Adam Lallana.
Sports Mole ayaa shaaca ka qaaday in Liverpool iyo Southampton ay ku heshiiyeen bixitna 20 milyan oo Ginni si ay ula wareegto Liverpool Adam Lallana.
Shabaka daan ayaa intaa ku dartay in Liverpool ay dhamaystirtay saxiixa Adam Lallana waxaana haray kaliya inuu maro tijaabada caafimaadka sida lagu qoray warbixinta.
Sidoo kale Football Direct ayaa sheegaya in laacib kaan oo hada ku sugan xarunta tabararka ee xulka qaranka England uu awoodo inuu tijaabada caafimdka ku maro meeshiisa, waxaana la filayaa in Liverpool ay ku dhawaaqdo saxiixa laacib kaan.
Aaron Ramsey Oo Doonaya In Qaliin Lagu Sameeyo.
Laacibka qadka dhexe ee kooxda Arsenal Aaron Ramsey ayaa doonaya inuu waqtiga fasaxa ee xaggaaga uu uga faa,idaysto inuu xal u helo dhibaatada dhaawac ee ku soo laabatay xili ciyaareed kan.
Daily Mail ayaa shaacisay in laacib kaan uu isku diyaarinayo inuu isku sameeyo qaliin bowdada ah waxaana la filayaa inuu la kulmo dhaqtar ku takhasusay qaliinada murqaha bowdada si uusan dib ugu soo laaban dhaawicii ladegay laacib kaan xili ciyaareedkii tagay.
Aaron Ramsey ayaa lugta ka jabay 2009 lakiin mar kale ayuu dib ugu soo laabtay garoomada wuxuuna la qaatay kooxdiisa xili ciyaareed aad u wanaagsan isagoo u gacan galiayay inay ku guulaysato FA Cup 9 sano kadib.
23 jir kaan ree Wales ayaa ugu yaraan 3 bilood dhaawac uga maqnaa kooxdiisa xili ciyaareed kan, wuxuuna doonaya inuu xal u raadiyo dhaawicii waqtiga dheer u diiday inuu ciyaaro.